Soo dejisan Panda Dome Advanced 20.00.00 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudPanda Dome Advanced
Bogga rasmiga ah: Panda Dome Advanced
Panda Dome Advanced – waa barnaamij loogu talagalay ilaalinta dhamaystiran ee nolosha macaamiisha. Barnaamijka ayaa had iyo jeer bixiya nidaam ka hortag ah oo ka dhan ah hanjabaadaha internetka iyada oo loo marayo tiknoolajiyado buluug ah oo ku salaysan xog badan oo bulshada ka mid ah. Panda Dome Advanced wuxuu ka hortagayaa been-abuurayaasha iyo nacfiyada in ay helaan helitaanka macluumaadka gaarka loo leeyahay, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ka fogaato shuruudaha dheeraadka ah ee madaxfurashada macluumaadka la xaday. Software wuxuu bixiyaa ammaanka xidhiidhka wireless adigoo ogaanaya shabakadaha cudurka qaba Wi-Fi. Panda Dome Advanced waxaa ku jira qalab lagu soo celinayo nidaamka haddii ay dhacdo infekshin leh xayawaan aad u xun ama fayrasyo adag oo aan la helin baaritaan dhaqameed. Xakameynta waalidku waxay kuu oggolaaneysaa inaad xakameyso isticmaalka waxyaabaha aan la rabin ee carruurta ku jirta internetka. Panda Dome Advanced sidoo kale waxay ku siinaysaa inaad isticmaasho qaabka xakamaynta codsiga si looga ilaaliyo barnaamijyada shaki laga shakiyo oo waxyeeleyn kara kombuyuutarkaaga.
Ka hortagga weerarrada iyo weerarrada webka
Bixinta bangiga internetka
Qalabka dib u soo kabashada, Backup, VPN
Soo dejisan Panda Dome Advanced
Faallo ku saabsan Panda Dome Advanced
Panda Dome Advanced Xirfadaha la xiriira
IETester – waa aalad lagula shaqeyn karo biraawsarka bogga Internetka. Softiweer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad eegto waafaqsanaanta dhaqanka code, qaabka, iyo qaabeynta qeybo kala duwan oo biraawsarka.